Sawiro Madaxweyne Deni oo Caleemo-saarkiisii u bedelay dib u heshiisiin Qaran iyo sharaftii Puntland oo soo noqotay | Goojacade
Home War Sawiro Madaxweyne Deni oo Caleemo-saarkiisii u bedelay dib u heshiisiin Qaran iyo...
Sawiro Madaxweyne Deni oo Caleemo-saarkiisii u bedelay dib u heshiisiin Qaran iyo sharaftii Puntland oo soo noqotay
Shacabka Soomaaliyeed ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay aad u hadal hayeen siyaasiyiin iyo Masuuliyiin faraha badan oo kala aragti duwanaa, kuwaas oo ka qayb geleyey xafladda Caleemosaarka Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdillaahi Deni.
Bulshada Soomaaliyeed oo ka duulaya dhaqan xumadii iyo wadaniyad laàantii madaxda Soomaaliyeed ayaa waxay saadaalinayeen rajoxumo iyo xagxagasho badan oo Garoowe ka dhacda, iyadoo Madaxweyne Deni laftiisa mararka qaarkood lagu tilmaamayey nin kooxda Damjadiid ka tirsan oo dab ku sii shidaya khilaafkii Soomaalidu caadeysatay ee qarannimadoodii baabiiyey.
Nasiib Wanaag xafladda oo 26 Jan 2019 Garoowe ka dhacday ayaa isu bedeshay dib u heshiisiin Qaran iyo iscafin Soomaaliyeed, taasoo noqonaysa guul weyn oo Soomaali u soo hoyatey, oo horseedaysa in Soomalidu khilaafyadeeda iyagu xalistaan oo ka baxdo gacmihii shisheeye ee isku sii diri jiray iyo in dal kale lagu soo heshiisiiyo.
Shalay iyadoo aan shisheeyo iyo beel caalam toona dhex joogin waxaa Madaxtooyadda Puntland kulan ku yeeshay oo danahoodii ka sheekaystay Madaxdii iyo Siyaasiyiintii Soomaaliyeed, iyagoo isla gaadhay is afgarad iyo barbilow wanaagsan.
Waxaa farxad ku wada quraacday Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo Madaxda Dawlad Goboleedyada oo shisheeye kala horjoogay, Madaxweyneyaashii hore oo waday mucaaradad dawlada curdan dhadhinaysa, Raiisalwasaare Cali Maxamed Geedi oo wacad ku maray inuu dhiig ku ilaalinayo dawladdii ay isaga iyo Cabdilaahi Yuusuf dhidibada u taageen ee Caasimada geeyeen.
Waxaa soo muuqanaysa in doorashadii Madaxweyne Siciid Cabdillaahi Deni ay noqonayso guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatey, uuna hormuud ka noqonayo in Soomaalidu isku tashadaan oo bartaan in wixii ka khaldama ay iyagu xalistaan, sidoo kale wuxuu dib u soo celiyey sharaftii Puntland ku lahayd Soomaalida dhexdeeda oo sanadihii ugu dambeeyey qiir qiir ku sii jirtay, iyadoo dad badani u arkeen in Puntland la dagaalamyso dib u dhiska Soomaaliya.
SAWIRO MUUJINAYA FARXADDA KULANKA:
Previous articleMareykanka oo dhisaya wado isku xirta Balli-doogle iyo Jabuuti
Next articleAl shabaab iyo Daacish oo ku dagaalamaya buuraleyda degmada Qandala